भीम रावलले भन्नुहुन्छ : फुट र विभाजन जस्तो देश र जनतालाई धोका र पार्टीप्रति ग’द्दारी हुने कु’कर्ममा कोही नलागौं…सहि लागे सेयर गर्नुहोस् । – yuwa Awaj
भीम रावलले भन्नुहुन्छ : फुट र विभाजन जस्तो देश र जनतालाई धोका र पार्टीप्रति ग’द्दारी हुने कु’कर्ममा कोही नलागौं…सहि लागे सेयर गर्नुहोस् ।
मंग्सिर ३, २०७७ बुधबार 9
काठमाडौं : नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्र अहिले आन्तरिक वि’वाद बढ्दै गइरहेको छ । प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच आ’रोप प्रत्या’रोप च’रम बिन्दुमा पुगेको छ ।
यसैबीच नेकपाका नेता भिम रावलले बैठकबाट नै समस्याको समाधान खोज्नुपर्ने बताएका छन् । बुधबार रावलले सामाजिक सञ्जालमार्फत सो कुरा बताउदै पार्टी फुट र विभाजन जस्तो देश र जनतालाई धो’का र पार्टीप्रति गद्दारी हुने कुकर्ममा कोही नलाग्न चेता’वनी समेत दिएका छन् ।
उनले नेकपा एकीकरणको घो’षणा, राजनीतिक प्रतिवेदन,केन्द्रीय कमिटी र कार्यदलको प्रतिवेदनमा आधारित स्थायी कमिटीको निर्णय, विधान र पद्ध’तिको पालना नै समस्याको समाधान भएको बताएका छन् ।
उनले लेखेका छन् – नेकपा एकीकरणको घो’षणा, राजनीतिक प्रतिवेदन,केन्द्रीय कमिटी र कार्यदलको प्रतिवेदनमा आधारित स्थायी कमिटीको निर्णय, विधान र पद्ध’तिको पालना नै समस्याको समाधान हो ।बैठकबाट समस्याको समाधान खोज्नुपर्छ। फुट र विभाजन जस्तो देश र जनतालाई धो’का र पार्टीप्रति ग’द्दारी हुने कुक’र्ममा कोही नलागौं।
सचिवालय बैठक आज दिउँसो १ बजे बालुवाटारमै बस्छ : प्रवक्ता श्रेष्ठ
काठमाडाैं : सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का सचिवालय सदस्य एवं प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले पूर्वनिर्धारित समयअनुसार नै सचिवालय बैठक बस्ने बस्ने बताउनुभएकाे छ ।
सामाजिक ट्वीटरमार्फत प्रवक्ता श्रेष्ठ आज बुधबार दिउँसो १ बजे बालुवाटारमा सचिवालय बैठक बस्ने जानकारी दिनुभएकाे हाे । ‘हामो पार्टीको केन्द्रीय सचिवालयको वैठक पूर्वनिर्धारित कार्यकमअनुसार आज १ बजे बालुवाटारमा बस्दैछ,’ प्रवक्ता श्रेष्ठले बुधबार बिहान ट्वीट गर्नुभएकाे छ ।
प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आज दिउँसाे १ बजे नै मन्त्रिपरिषद् बैठक बाेलाउनु भएकाे छ । यसले सत्ता’धारी दल नेकपाभित्र कि’चलो झनै बढेको देखिन्छ । पार्टी फुटको संघारमा पुगेको विश्लेष’णसमेत गर्न थालिएको छ।
कात्तिक २८ को सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष पुष्प कमल दाहाल प्रचण्डले पेस गर्नुभएका प्रस्ताव तथा पत्रमाथि ३ मंसिरमा छलफल गर्ने तय भएको थियो । तर, प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष ओलीले बुधबारको सचिवालय बैठक सार्न प्रयास गर्दै आउनुभएकाे थियाे ।
ओली भने नेकपा बैठक राेक्ने प्रयासमा हुनुहुन्छ । अध्यक्ष ओलीको सन्देश लिएर पार्टी महासचिव विष्णु पौडेल मंगलबार बिहान अध्यक्ष दाहालकहाँ पुग्नुभएकाे थियाे । प्रचण्डले प्रधानमन्त्री उपस्थित नभए पनि बुधबार बैठक बस्ने अडान राखेपछि पौडेल फर्किनुभएकाे थियाे ।
Prevरु.५०० लिएर काठमाण्डौ छिरेका युवा २८ वर्षकै कलि,लो उमेरमा करोडपति…हेर्नुहोस् ।
Nextप्रभुको लिलामै टिकिरहेको नेकपा – फेरि भयो चिनियाँ राजदूतको इन्ट्री !
प्रधानमन्त्री ओलीले देउवालाई बालुवाटार बोलाएर भने : मिलेर सरकार बनाऔं, म जे गर्न तयार छु !
विवाह गरिदिने आमाबुवाको सपना अधुरै बनाएर अस्ताए प्रहरी इन्सपेक्टर बुढाथोकी, पुरै गाउँ शोकमा डुब्यो !
बधाई ! क्याप्टेन बिजय लामालाई यति ठूलो अवा’र्डबाट सम्मानित…हेर्नुहोस् ।
स्व.राजा वीरेन्द्र भन्नुहुन्थ्यो – जनताको करबाट चल्ने हाम्रो खर्च, जथाभावी खर्च गर्नु हुँदैन…हेर्नुहोस् ।
आज कहाँकहाँ हुँदैछ भारी वर्षा ? सतर्क रहन आग्रह (1514)
असार ७ पछि ‘स्मार्ट लकडाउन’ गरिने (1354)
१.	आज कहाँकहाँ हुँदैछ भारी वर्षा ? सतर्क रहन आग्रह (1514)
२.	असार ७ पछि ‘स्मार्ट लकडाउन’ गरिने (1354)